Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nandresy lahatra mpandraharaha sinoa maro -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : Nandresy lahatra mpandraharaha sinoa maro
Nifarana omaly ny fihaonambe ara-toekarena eo amin’i Sina sy Afrika, na ilay antsoina hoe Focac, notanterahina tany Beijing, Sina. Anisan’ireo firenena afrikanina miisa 26 niatrika izany i Madagasikara ka ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitarika ny delegasiona malagasy.
Feno dia feno ny fandaharam-potoan’ny Filohan’ny Repoblika tany an-toerana tamin’izany. Nisy mantsy ny fihaonany tamin’ireo mpandraharaha sinoa maro, toa ny orinasa China Railway Construction Corporation (CRCC), ny orinasa Afec, ny China Railway Engineering Corporation (Crec) ary ny orinasa Startimes sy ny orinasa Huawei, sns.
Tamin’izany indrindra no nitondran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ireo orinasa sy mpandraharaha maro ny hetahetany amin’ny tetikasa fampandrosoana ny firenena. Nisy, araka izany ny fifandresen-dahatra amin’ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin’ireo orinasa sy mpandraharaha.
Teo ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin’i Sina, indrindra eo amin’ny fampandrosoana ara-toekarena.
Hita ary tsapa, noho izany, fa tsy mitsahatra ny mitady sy mikaro-bahaolana amin’ny hampandrosoana an’i Madagasikara ho lavitry ny fahantrana ny Filoham-pirenena am-perin’asa.
50 Tapitrisa Dolara
Anisan’ny nivoitra ihany koa ny tetikasa fametrahana ilay “Smart City” hiarahan’i Madagasikara amin’ny orinasa mpikirakira teknolojia sinoa, Huawei.
Voalaza fa efa mandroso ny fametrahana io tetikasa io amina tanàna maro eto Madagasikara. Izany hoe, tafiditra amin’ity tetikasa ity ny fametrahana tambajotram-piarovana, ny fametrahana fakan-tsary sy horonantsary ho fanaraha-maso ny tanàna ary ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisan-davitra maro, sns. Araka ny vaovao, mitentina hatrany amin’ny 50 Tapitrisa Dolara any ity tetikasa ity.
Natao kosa izany mba hisorohana sy hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho lany eto amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny tanàna hoenti-manenjika ireo tsy manara-dalàna, ary indrindra hametrahana lamina vaovao mba hisian’ny fiarahamonina mirindra eny anivon’ireo faritra maro.
Azo inoana, araka izany, fa hampihena ny tsy fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena ity tetikasa hiarahana amin’ny orinasa Huawei ity.
Ankoatra izay, tetikasa maro ao anatin’ny telo taona manaraka no hovatsian’ny firenena sinoa vola aty amin’ny kaontinanta afrikanina, izay mitentina hatrany amin’ny 60 Tapitrisa Dolara. Tsy diso anjara amin’io famatsiana tetikasa io anefa i Madagasikara satria anisan’ireo firenena afrikanina hisitraka izany.
Anisan’ny nivoitra ihany koa ny tontolon’ny angovo izay hitondran’ny firenena sinoa famatsiana goavana indrindra eo amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina, toa ny herinaratra azo avy amin’ny masoandro, ny herinaratra azo avy amin’ny toho-drano. Eo ihany koa ny teo amin’ny tontolon’ny fanabeazana, sns.
Marihina mantsy fa tao anatin’ity Fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity, maro ireo zava-bita tamin’ny fiaraha-miasa tamin-dry zareo Sinoa. Anisan’izany ny fananganana ivon-toeram-pampianarana teny sinoa, ny fiofanana ho an’ny mpanao gazety tany Sina, ny sosialim-bahoaka toa ny eo amin’ny fahasalamana, sns.
Araka izany, hanokatra endrika vaovao eo amin’ny tontolon’ny toe-karena aty Afrika ny Focac amin’ny alalan’ny “Fehikibo sy ny Lalana”. Ity farany mantsy dia manohana sy mifandraika amin’ny fandaharan’asa izay tafiditra indrindra amin’ny vina Fisandratana 2030; izay himasoan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.